ရဲရာထူး ခန႔္ခ်ဳပ္ ဘာေၾကာင့္႐ူး ရလဲ ရွင္းၿပီ ..” က်ေနာ့္ ကို လိင္အျမတ္ထုတ္ အခြင့္ေအရး ယူသြားတာ ျဖစ္လို႔..အဲ့ဒီ့ ရဲေမ (၁၈) ေယာက္ကို ျပန္တရားစြဲ ဖို႔ စီစဥ္ေနဟုဆို “ - Lucky9
ရဲရာထူး ခန႔္ခ်ဳပ္ ဘာေၾကာင့္႐ူး ရလဲ ရွင္းၿပီ ..” က်ေနာ့္ ကို လိင္အျမတ္ထုတ္ အခြင့္ေအရး ယူသြားတာ ျဖစ္လို႔..အဲ့ဒီ့ ရဲေမ (၁၈) ေယာက္ကို ျပန္တရားစြဲ ဖို႔ စီစဥ္ေနဟုဆို “
July 1, 2020 Thi Ha ကြားသိရသမျှ 0
ရဲ ရာထူး ခန႔္ခ်ဳပ္ ေဇာ္မိုးသန္း အေနျဖင့္ ၎အား တိုင္ၾကား ထား သည့္ ရဲေမ ၁၈ ဦးအေပၚ ကာမလာဘ္ထိုးမႈ အပါအဝင္ စိတ္ေရာဂါျဖစ္ေပၚ ခံစားရမႈ တို႔အတြက္ တရားစြဲ ဆိုဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ရဲရာထူးခန႔္ခ်ဳပ္ေဇာ္မိုးသန္းႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား ထံ မွ သိရသည္ ။ ထိုကိစ ၥနဲ႔ပတ္သက္ ၍ ဦးေဇာ္မိုးသန္း အားေမးျမန္းရာ ၎မွ ယခုလိုေျဖၾကားခဲ့ ပါသည္-“ညည္း တို႔ ရာထူးတိုး လိုခ်င္ ရင္ေတာ့ ငါနဲ႔ လာအိပ္ရမယ္ လို႔ ေနာက္ေျပာင္ က်ီစယ္တဲ့ သေဘာ နဲ႔ ကိုေဌးဦး လိုပဲ လႊတ္ခနဲ ေျပာမိ လိုက္႐ုံပါ..”. ဒါကို သူတို႔က အတည္ေျပာတယ္ ထင္ၿပီး ေရာက္လာေတာ့ လည္း ကိုယ့္ကုသိုလ္ နဲ႔ ကိုယ္ပဲေလ လို႔မွတ္ ယူလိုက္ေလ်ာ ခဲ့တဲ့ သေဘာပါပဲ….တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ သူတို႔ကသာ က်ေနာ့ကို လိင္ အျမတ္ထုတ္ အခြင့္အေရး ယူသြားတာျဖစ္လို႔..
က်ေနာ့ဘက္ က တရားစြဲ သင့္တယ္ လို႔ ယူဆမိ ပါတယ္… ဒါ့အျပင္ က်ေနာ့အေန နဲ႔ တပ္မေတာ္ကိုစတင္ ဝင္ေရာက္စဥ္ကေန အသြင္ေျပာင္းၿပီးရဲရာထူးခန႔္ခ်ဳပ္ျဖစ္လို႔ အခင္းမျဖစ္ပြားခင္အခ်ိန္ထိ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ပကတိက်န္းမာ ခဲ့ေပမဲ့ အခုလိုတိုင္တန္းမႈေတြျဖစ္မွ ႐ုတ္ခ်ည္းစိတ္ေဝဒနာသည္ဘဝေရာက္ရတာဟာ အဲ့ဒီ ၁၈ ေယာက္ နဲ႔ အိပ္ၿပီးမွ ျဖစ္လာ ရတာေၾကာင့္ က်ေနာ့ရဲ႕ စိတ္က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈျဖစ္ရ တဲ့ တရားခံ ဟာ အဲ့ဒီ ၁၈ ေယာက္ေၾကာင့္ ဆိုတာ ထင္ရွားသိသာ တဲ့ အတြက္ သူတို႔ကို တရားစြဲဖို႔ စီစဥ္တာျဖစ္တယ္’ လို႔.…ရဲရာထူးခန႔္ခ်ဳပ္ ေဇာ္မိုးသန္း မွ ျပန္လည္ေျပာ ဆိုထားေၾကာင္း သိ ရသည္ ။
ရဲ ရာထူး ခန့်ချုပ် ဇော်မိုးသန်း အနေဖြင့် ၎င်းအား တိုင်ကြား ထား သည့် ရဲမေ ၁၈ ဦးအပေါ် ကာမလာဘ်ထိုးမှု အပါအဝင် စိတ်ရောဂါဖြစ်ပေါ် ခံစားရမှု တို့အတွက် တရားစွဲ ဆိုဖွယ် ရှိကြောင်း ရဲရာထူးခန့်ချုပ်ဇော်မိုးသန်းနှင့် နီးစပ်သူများ ထံ မှ သိရသည် ။ ထိုကိစ ္စနဲ့ပတ်သက် ၍ ဦးဇော်မိုးသန်း အားမေးမြန်းရာ ၎င်းမှ ယခုလိုဖြေကြားခဲ့ ပါသည်-
“ညည်း တို့ ရာထူးတိုး လိုချင် ရင်တော့ ငါနဲ့ လာအိပ်ရမယ် လို့ နောက်ပြောင် ကျီစယ်တဲ့ သဘော နဲ့ ကိုဌေးဦး လိုပဲ လွှတ်ခနဲ ပြောမိ လိုက်ရုံပါ..”. ဒါကို သူတို့က အတည်ပြောတယ် ထင်ပြီး ရောက်လာတော့ လည်း ကိုယ့်ကုသိုလ် နဲ့ ကိုယ်ပဲလေ လို့မှတ် ယူလိုက်လျော ခဲ့တဲ့ သဘောပါပဲ….
တနည်းအားဖြင့် ပြောရရင် သူတို့ကသာ ကျနော့ကို လိင် အမြတ်ထုတ် အခွင့်အရေး ယူသွားတာဖြစ်လို့..
ကျနော့ဘက် က တရားစွဲ သင့်တယ် လို့ ယူဆမိ ပါတယ်… ဒါ့အပြင် ကျနော့အနေ နဲ့ တပ်မတော်ကိုစတင် ဝင်ရောက်စဉ်ကနေ အသွင်ပြောင်းပြီးရဲရာထူးခန့်ချုပ်ဖြစ်လို့ အခင်းမဖြစ်ပွားခင်အချိန်ထိ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ပကတိကျန်းမာ ခဲ့ပေမဲ့ အခုလိုတိုင်တန်းမှုတွေဖြစ်မှ ရုတ်ချည်းစိတ်ဝေဒနာသည်ဘဝရောက်ရတာဟာ အဲ့ဒီ ၁၈ ယောက် နဲ့ အိပ်ပြီးမှ ဖြစ်လာ ရတာကြောင့် ကျနော့ရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှုဖြစ်ရ တဲ့ တရားခံ ဟာ အဲ့ဒီ ၁၈ ယောက်ကြောင့် ဆိုတာ ထင်ရှားသိသာ တဲ့ အတွက် သူတို့ကို တရားစွဲဖို့ စီစဉ်တာဖြစ်တယ်’ လို့.…
ရဲရာထူးခန့်ချုပ် ဇော်မိုးသန်း မှ ပြန်လည်ပြော ဆိုထားကြောင်း သိ ရသည် ။
ရဲ ရာထူး ခန့်ချုပ် ဇော်မိုးသန်း အနေဖြင့် ၎င်းအား တိုင်ကြား ထား သည့် ရဲမေ ၁၈ ဦးအပေါ် ကာမလာဘ်ထိုးမှု အပါအဝင် စိတ်ရောဂါဖြစ်ပေါ် ခံစားရမှု တို့အတွက် တရားစွဲ ဆိုဖွယ် ရှိကြောင်း ရဲရာထူးခန့်ချုပ်ဇော်မိုးသန်းနှင့် နီးစပ်သူများ ထံ မှ သိရသည် ။ ထိုကိစ ္စနဲ့ပတ်သက် ၍ ဦးဇော်မိုးသန်း အားမေးမြန်းရာ ၎င်းမှ ယခုလိုဖြေကြားခဲ့ ပါသည်-“ညည်း တို့ ရာထူးတိုး လိုချင် ရင်တော့ ငါနဲ့ လာအိပ်ရမယ် လို့ နောက်ပြောင် ကျီစယ်တဲ့ သဘော နဲ့ ကိုဌေးဦး လိုပဲ လွှတ်ခနဲ ပြောမိ လိုက်ရုံပါ..”. ဒါကို သူတို့က အတည်ပြောတယ် ထင်ပြီး ရောက်လာတော့ လည်း ကိုယ့်ကုသိုလ် နဲ့ ကိုယ်ပဲလေ လို့မှတ် ယူလိုက်လျော ခဲ့တဲ့ သဘောပါပဲ….တနည်းအားဖြင့် ပြောရရင် သူတို့ကသာ ကျနော့ကို လိင် အမြတ်ထုတ် အခွင့်အရေး ယူသွားတာဖြစ်လို့..
ကျနော့ဘက် က တရားစွဲ သင့်တယ် လို့ ယူဆမိ ပါတယ်… ဒါ့အပြင် ကျနော့အနေ နဲ့ တပ်မတော်ကိုစတင် ဝင်ရောက်စဉ်ကနေ အသွင်ပြောင်းပြီးရဲရာထူးခန့်ချုပ်ဖြစ်လို့ အခင်းမဖြစ်ပွားခင်အချိန်ထိ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ပကတိကျန်းမာ ခဲ့ပေမဲ့ အခုလိုတိုင်တန်းမှုတွေဖြစ်မှ ရုတ်ချည်းစိတ်ဝေဒနာသည်ဘဝရောက်ရတာဟာ အဲ့ဒီ ၁၈ ယောက် နဲ့ အိပ်ပြီးမှ ဖြစ်လာ ရတာကြောင့် ကျနော့ရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှုဖြစ်ရ တဲ့ တရားခံ ဟာ အဲ့ဒီ ၁၈ ယောက်ကြောင့် ဆိုတာ ထင်ရှားသိသာ တဲ့ အတွက် သူတို့ကို တရားစွဲဖို့ စီစဉ်တာဖြစ်တယ်’ လို့.…ရဲရာထူးခန့်ချုပ် ဇော်မိုးသန်း မှ ပြန်လည်ပြော ဆိုထားကြောင်း သိ ရသည် ။
ရဲ ရာထူး ခန့ျခြုပျ ဇောျမိုးသနျး အနဖွေင့ျ ၎င်းငျးအား တိုငျကွား ထား သည့ျ ရဲမေ ၁၈ ဦးအပေါျ ကာမလာဘျထိုးမှု အပါအဝငျ စိတျရောဂါဖွဈပေါျ ခံစားရမှု တို့အတှကျ တရားစှဲ ဆိုဖှယျ ရှိကွောငျး ရဲရာထူးခန့ျခြုပျဇောျမိုးသနျးနှင့ျ နီးစပျသူမြား ထံ မှ သိရသညျ ။ ထိုကိစ ်စနဲ့ပတျသကျ ၍ ဦးဇောျမိုးသနျး အားမေးမွနျးရာ ၎င်းငျးမှ ယခုလိုဖွကွေားခဲ့ ပါသညျ-
“ညညျး တို့ ရာထူးတိုး လိုခငြျ ရငျတော့ ငါနဲ့ လာအိပျရမယျ လို့ နောကျပွောငျ ကြီစယျတဲ့ သဘော နဲ့ ကိုဌေးဦး လိုပဲ လှှတျခနဲ ပွောမိ လိုကျရုံပါ..”. ဒါကို သူတို့က အတညျပွောတယျ ထငျပွီး ရောကျလာတော့ လညျး ကိုယ့ျကုသိုလျ နဲ့ ကိုယျပဲလေ လို့မှတျ ယူလိုကျလြော ခဲ့တဲ့ သဘောပါပဲ….
တနညျးအားဖွင့ျ ပွောရရငျ သူတို့ကသာ ကနြော့ကို လိငျ အမွတျထုတျ အခှင့ျအရေး ယူသှားတာဖွဈလို့..
ကနြော့ဘကျ က တရားစှဲ သင့ျတယျ လို့ ယူဆမိ ပါတယျ… ဒါ့အပွငျ ကနြော့အနေ နဲ့ တပျမတောျကိုစတငျ ဝငျရောကျစဉျကနေ အသှငျပွောငျးပွီးရဲရာထူးခန့ျခြုပျဖွဈလို့ အခငျးမဖွဈပှားခငျအခြိနျထိ ကိုယျရောစိတျပါ ပကတိကနြျးမာ ခဲ့ပမေဲ့ အခုလိုတိုငျတနျးမှုတှဖွေဈမှ ရုတျခညြျးစိတျဝဒေနာသညျဘဝရောကျရတာဟာ အဲ့ဒီ ၁၈ ယောကျ နဲ့ အိပျပွီးမှ ဖွဈလာ ရတာကွောင့ျ ကနြော့ရဲ့ စိတျကနြျးမာရေးခြို့ယှငျးမှုဖွဈရ တဲ့ တရားခံ ဟာ အဲ့ဒီ ၁၈ ယောကျကွောင့ျ ဆိုတာ ထငျရှားသိသာ တဲ့ အတှကျ သူတို့ကို တရားစှဲဖို့ စီစဉျတာဖွဈတယျ’ လို့.…
ရဲရာထူးခန့ျခြုပျ ဇောျမိုးသနျး မှ ပွနျလညျပွော ဆိုထားကွောငျး သိ ရသညျ ။
မကြာမီ ထုတ်ဝေတော့မယ့် စာအုပ်အတွက် အမှတ်တရ လက်မှတ်များထိုးပေးခဲ့သည့် ကျော်သူ
မဂၤလာသတင္း – ဆန္စပါး အဓိကတင္ပို႔ေရာင္းခ်တဲ့ ႏိုင္ငံအျဖစ္ USDA ကအသိအမွတ္ျပဳ ခံလိုက္ရတဲ့ျမနိမာျပည္။
လက္ေကာက္ဝတ္က လမ္းေၾကာင္းေလးက သင့္ရဲ့ ကံၾကမၼာ
ဟာသသရုပ်ဆောင် လူရွင်တော် ဦးမန်းဝင်း ကွယ်လွန်
သင့္ေမြးရက္ ကေျပာတဲ့ သင့္ဖူးစာရွင္/သင့္ခ်စ္သူအေၾကာင္း…
လူေသကို မေၾကာက္ လူရွင္ကို ေၾကာက္သည့္ အမ်ိဳးသမီး သုဘရာဇာ မၾကည္ၾကည္ဝင္း